သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူ မိတ်ကပ်ခိုင်ခိုင် ကို့ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားတဲ့အပေါ် ယူကြုံးမရ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ မိတ်ကပ်ညီညီမောင် – Cele Posts
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ မိတ်ကပ်ညီညီမောင်ကတော့ သူ့ချစ်ရတဲ့တပည့်လေး ကို့ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားလို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေပါတယ်သုသုက အခုလိုပဲသူ့မရဲ့အကောင့်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ကနေအလုပ်လာလုပ်တဲ့ ရခိုင်မလေးမို့ခိုင်ခိုင်လို့ အမေခေါ်တာလေအမေဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တော့လဲအောက်ခြေသိမ်းကစလုပ်ပေးတဲ့ကလေးပါ။
အမေကိုချစ်တဲ့ ကလေးဆိုင်မှာ မလုပ်တော့လဲ အမေကောင်းကြောင်း ကျေးဇူးရှိကြောင်းပဲပြောတဲ့ကျေးဇူးသိတဲ့ ကလေးပါ။အလှပကြိုက် မိန်းမလိုဝတ်စားနေရတာကြီုက်အပျော်ကြိုက်တဲ့ သမီးမို့သူကိုစဖို့ photoလေးတွေအမေက အမြဲသိမ်းထားတာလေသမီးရယ်ငယ်လွန်းသေးတယ်ဖွင်မပြောပေမဲ့.ငါရင်ထဲရှိပါတယ်ဟယ် နင်တို့တပည့်တွေက ငါမိသားစုတွေပါပဲခိုင်ခိုင်ရယ်….
ဘာတွေစိတ်.. ထဲဖြစ်နေလို့လုပ်လိုက် ရတာလဲ …နေလဲသမီးရယ် အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ.. ငါရင်တွေကွဲပြန်ပြီဟိုနေ့က မှ.. မထက် (ကျော်ထက်)နဲ့ ဒါကြီးပြီး…ရင်ငါတို့အခြောက်မ မိသားစုလေးပြန်ဆုံကျမယ်ပြောနေကျတာလေကံကြမ္မာ.ရက်စက်လိုက်တာ…သွားနင်အုန်းတော့သမီးရေခိုင်ခိုင်ရေဆရာသမားမိဘသိတက်တဲ့ ကလေးငြိမ်းချမ်းပါစေPhotoလေးကသူကို စဖို့သိမ်းထားတာလေးခုတော့ စိတ်မကောင်းစရာပဲနော် ပရိသတ်ကြီးရေကောင်းရာဘုံဘဝရရှိစေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြရအောင်နော်။
သူ့ရဲ့တပညျ့ဖွဈသူ မိတျကပျခိုငျခိုငျ ကို့ကိုယျကိုယျသတျသသှေားတဲ့အပျေါ ယူကွုံးမရ ဝမျးနညျးကွကှေဲနတေဲ့ မိတျကပျညီညီမောငျ
ခဈြပရိသတျကွီးရေ မိတျကပျညီညီမောငျကတော့ သူ့ခဈြရတဲ့တပညျ့လေး ကို့ကိုယျကိုယျသတျသသှေားလို့ ဝမျးနညျးပူဆှေးနပေါတယျသုသုက အခုလိုပဲသူ့မရဲ့အကောငျ့မှာတငျထားခဲ့ပါတယျ။ ရခိုငျကနအေလုပျလာလုပျတဲ့ ရခိုငျမလေးမို့ခိုငျခိုငျလို့ အမခေျေါတာလအေမဆေိုငျမှာအလုပျလုပျတော့လဲအောကျခွသေိမျးကစလုပျပေးတဲ့ကလေးပါ။
အမကေိုခဈြတဲ့ ကလေးဆိုငျမှာ မလုပျတော့လဲ အမကေောငျးကွောငျး ကြေးဇူးရှိကွောငျးပဲပွောတဲ့ကြေးဇူးသိတဲ့ ကလေးပါ။အလှပကွိုကျ မိနျးမလိုဝတျစားနရေတာကွီုကျအပြျောကွိုကျတဲ့ သမီးမို့သူကိုစဖို့ photoလေးတှအေမကေ အမွဲသိမျးထားတာလသေမီးရယျငယျလှနျးသေးတယျဖှငျမပွောပမေဲ့.ငါရငျထဲရှိပါတယျဟယျ နငျတို့တပညျ့တှကေ ငါမိသားစုတှပေါပဲခိုငျခိုငျရယျ….
ဘာတှစေိတျ.. ထဲဖွဈနလေို့လုပျလိုကျ ရတာလဲ …နလေဲသမီးရယျ အဖွဈဆိုးလိုကျတာ.. ငါရငျတှကှေဲပွနျပွီဟိုနကေ့ မှ.. မထကျ (ကြျောထကျ)နဲ့ ဒါကွီးပွီး…ရငျငါတို့အခွောကျမ မိသားစုလေးပွနျဆုံကမြယျပွောနကေတြာလကေံကွမ်မာ.ရကျစကျလိုကျတာ…သှားနငျအုနျးတော့သမီးရခေိုငျခိုငျရဆေရာသမားမိဘသိတကျတဲ့ ကလေးငွိမျးခမျြးပါစေPhotoလေးကသူကို စဖို့သိမျးထားတာလေးခုတော့ စိတျမကောငျးစရာပဲနျော ပရိသတျကွီးရကေောငျးရာဘုံဘဝရရှိစဖေို့ ဆုတောငျးပေးကွရအောငျနျော။
အောက်ဆီဂျင်စက်များကို လူနာတွေရဲ့အိမ်အရောက် မမောနိုင်မပန်းနိုင် ကိုယ်တိုင်သယ်ယူပေးနေတဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်